Buhoodle oo Wasiir ka tirsan Somaliland lagu soo dhoweeey [Daawo]
By GAROWE ONLINE , Buhoodle
BUHOODLE- Wafdi ka socda maamulka Somaliland oo uu hogaaminayey Wasiirka howlaha guud iyo gadiidka ayaa gaarey magaalada Buhoodle ee gobolka Cayn.
Cabdirashid Ducaale Qanbi oo Madaxweyne Muuse Biixi ku badalay Wasiirkii hore caafimaadka Somaliland Xagla-toosiye ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Buhoodle, waxaana la mariyey dhamaan jidadka magaalada iyada oo ay galbinayaan gadiidka dagaalka.
Wasiirka cusub ayaa waxaa la socda wafti ka kooban saraakiil dowladeed kuwasoo kasoo jeeda Gobolada Sool iyo Buhoodle.
Wararka la xiriira safarka Wasiirka ayaa sheegaya iney u socdaan ka qayb galka gogol Nabdeed oo la dhigayo degaanka Qorile ay xadka wadaagaan Gobolada Sool iyo Nugaal.
Booqashada Wasiirkaan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisad ka dhex taagan tahay maamulka Somaliland iyo Puntland.
Somaliland ayaa weerar ay ku soo qaadey Tuulada Tukaraq ku qabsatey Jan 8, 2017.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo Gudoomiye ku xigeenka Barlamanka ayaa kasoo jeeda degaankaas oo ay Dowlada Puntalnd sheegto iney kamid yihiin Gobolada maamulkaan hoos taga.
Beelaha daga Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxa ka dhextaagan khilaaf siyaasadeed oo sababey iney u qaybsamaan labada maamulka ee Puntland iyo Somaliland.
Maamulka Somaliland siyaasiyiinta kaga jirta goboladaan ayaa ah kuwo booqashooyin joogta ah ku taga degaanada ay kasoo jeedaan halka dhinaca Puntland xubnaha ku sugan aysan inta badan dhaafin magalaada Garowe. Halkaan ka daawo soo dhoweynta iyo khudbado la jeediyey
Soomaaliya: Dagaalka Tukaraq iyo saameynta siyasadeed uu yeelan karo
Puntland 27.01.2018. 00:05
Ciidamada Somaliland oo Tuulada Tukaraq ee ka tirsan gobolka Sool dagaal gaadmo ah....
Culimaa’udiin damacsan iney dhexdhexaadiyaan Puntland iyo Somaliland
Puntland 14.06.2018. 01:47
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo gaarey Buuhoodle
Puntland 30.05.2018. 14:13
Soomaaliya : Xaalalada magalada Tukaraq iyo waxay ku waabariisatey
Soomaliya 16.05.2018. 08:58
Puntland oo digniin ku aadan dagaalka Tukaraq u dirtey dowlada Soomaaliya [Akhri]
Puntland 27.05.2018. 15:42
Dagaalka Saaka ka dhacey degaanka Tukaraq
Puntland 24.05.2018. 09:06
Kenya oo ka jawaabtay eedeynta Dowladda Federaalka Soomaaliya 28.02.2020. 14:34
"Colaada" Dowladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna oo weji cusub yeelatay 28.02.2020. 13:21
Qoysaska Al-Shabaab oo "ka baxaya" agagaarka Dhuusaamareeb 28.02.2020. 10:33
Xiisadda DF Soomaaliya iyo Ahlu Sunna oo gacan ka hadal isku rogtay 28.02.2020. 09:04
Dowladda Soomaaliya oo eedeyn iyo baaq u jeedisay Kenya 27.02.2020. 21:10
Weerar loo maleegayo huteel caan ah oo digniin laga soo saarey 27.02.2020. 21:00